Faa’iidooyinka yaabka leh ee uu leeyahay diirka liin dhanaantu - Horn Future
Dad badan oo naga mid ah ma garanayaan muhiimadda iyo caafimaadka iyo bilic-sanaanta ay leedahay liin dhanaantu,laakiin imisa naga mid ah ayaa ka fikira muhiimadda iyo waxtarka uu leedahay diirka liinta oo ku dadaala in uunan tuurin?
Waxa ku jira diirka liin dhanaanta inta u dhaxaysa 5 ilaa 10 goor oo ah( vitamin C)ga kaas oo ku jira casiirkeega, iyadoo sidoo kale ay ku jiraan tiro badan oo( vitamin A) ah, kuwaas oo wanaajinaya caafimaadka iyo daryeelkiisa.
Waa kuwan soo socda 7 faa’iidooyin oo yaab ah oo diirka liin dhanaanta uu leeyahay oo ah sida mucjiso caafimaad oo dabiici ah,sida uu qoray website ka “Bold Sky” ee gaarka ku ah Caafimaadka:
1.Waxa uu la dagaalamaa unugyada kansarka
Waxa diirka liintu ka caawiyaa dagaalka ka dhanka ah unugyada kansarka,sababtoo ah waxa ku jira maadooyinka kala ah( flavonoids, iyo Salvestrol Q 40) oo la dagaalama unugyada kansarka, sidaas daraadeed cunista joogtada ah ee diirka liin dhanaantu waxa uu kaa caawinayaa ka hortagga dhowr nuuc oo kamid ah kansarka, sida kansarka naasaha, midhiqiraha,dubka iyo kuwo kale.
2. Waxa uu yareeyaa (cholestrol) ka
Diirka liinta oo ay ku jirto maadada( Polyphenols) ayaa waxa sidaa daraadeed uu kaa caawiyaa hoos u dhiga heerka (LDL cholesterol)ka ama subbagga xun ee ku jira jidhka, taas oo ka caawisaa dhowrsanaanta iyo badbaadada xididdada dhiig-mareenada iyo caafimaadka wadnaha.
3.Waxa ay ilaaliyaan caafimaadka lafaha
Diirka liintu waxa uu kaa caawiyaa ilaalinta lafaha caafimaadkooga, sababtoo ah waxa ku jira tiro badan oo (vitamiin C iyo calcium) ka.
4. Waxa uu ka hortaggaa cudurka wadnaha
Waxa diirka liinta ku jira maadada (Potassium) oo ilaalisa heerka caadiga ah ee cadaadiska dhiigga, taas oo ah maado ka hortagta cudurada wadnaha iyo halbowlayaasha dhiig-mareenada .
5.Waxa uu ilaaliyaa caafimaadka afka
Waxa la ogyahay in yaraanshaha (vitamin C)ga ay sababto dhibaatooyinka afka iyo ilkaha, sidaas daraadeed diirka liintu waxa uu yahay hab wax ku ool ah oo ka hortagga dhiigista ciridka iyo bararka.
6.Waxa uu ilaaliyaa dubka
Waxa ku jira diirka liinta acidka (citric acid) oo lagu daray (vitamin C), taas oo ka caawisaa nadiifinta dhiigga iyo baabi’inta unugyada wasakhda ee dubka,arrintaas oo ku siinaysa dub caafimaad leh, waxa sidoo kale ku jira maadada ka hortagta dhaawaca soo gaadha unugyada jidhka ee (antioxidanter)ka taas oo ka caawisa dubka inay ka saarto sunta.
Haddii aad ka cabanayso finanka wajiga ama fin doob,doorashada ugu wanaagsan waa marsashada diirka liinta.
7. Waxa uu hoos u dhigaa misaanka
Diirka liintu waxa uu kaa caawiyaa yaraynta miisaanka xad-dhaafka ah,sababtoo ah waxa ku jira maadada (Pectin) ee milmi karta oo ah nuuc kamid maadooyinka fudaydiya dheef-riddiqqa, taas oo ka caawisaa yareeynta miisaanka.
« Tedros oo eed halis ah loo jeediyay oo sababi karta in uu ku guuldaraysto tartanka WHO	» Ururka ICRC oo sheegay in 115 qof ay ku dhimatay cudurka shuban biyoodka Yemen